Best GYC200 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
A na -ahazi ihe nrụpụta akụrụngwa akụrụngwa site na ihe owuwu ụlọ, yana usoro ya niile dị mfe ma dịkwa mma.
A na -ejikarị granulator akọrọ na ọgwụ, ihe ọmụmụ, nri, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ kacha mma icheta ihe ndị dị mfe irekasị mgbe ewepụtara ya na ikpo ọkụ, dị mfe ịmịkọrọ mmiri, na mmetụta nke ikpo ọkụ Enwere ike iji melite usoro ihe, N'ọhịa ọgwụ, a na -ejikarị akụkụ ya eme ihe na mbadamba mbadamba, capsules jupụtara.andgranules.Na mgbakwunye, granulator akọrọ nwere njirimara nke usoro dị mfe, usoro kọmpat, ikike dị elu, iji ya na mmezi ya, obere mkpọtụ. Dabere na ọtụtụ uru, a na -eji ya arụ ọrụ na -adịghị ahụkebe.
A na -ahazi ihe nrụpụta nrụgide akụrụngwa site na ihe owuwu ụlọ, yana ihe owuwu ya niile dị mfe ma dị mma. Nke dị mma maka ịtọpụ na nhicha. Na ihuenyo mmetụ LCD na ọtụtụ teknụzụ njikwa akpaka, ọrụ ahụ dị mfe, na usoro mmepụta teknụzụ nwere ọgụgụ isi na ọ dị mfe ịchọta na idekọ igwe niile bụ nke igwe anaghị agba nchara dị mma.na ihe eji eme ya bụ ihe 316.Kwezuo ihe GMP chọrọ. Nrụgide nrụgide nwere ike ijikwa ọnọdụ okpomọkụ nke ala nrụgide site na mmiri jụrụ oyi iji gbochie akụrụngwa ha ka ọ ghara ịdị njọ ma kekọta ya n'ihi usoro ikpo ọkụ.
1. isi igwe nwere akụkụ ndị a: okpokoro n'ozuzu ya, sistemụ nri agụụ (igwe inyeaka), sistemụ nri kwụ ọtọ, sistemụ ịpị mbadamba, sistemụ nsị, usoro ọka niile, sistemụ nyocha (igwe inyeaka), sistemụ hydraulic, arụ ọrụ mechiri emechi. biini, sistemụ ikuku, sistemụ mmiri jụrụ oyi (igwe inyeaka) yana sistemụ njikwa ọkụ eletrik.
Nhazi cantilever nke igwe ahụ niile na -ekewa mpaghara nhazi site na mpaghara nnyefe ike, na -enwe ọdịdị dị ọcha, ịtọpụ na nhicha dị mfe, wee chọpụta mmepụta emechiri emechi dị ọcha site na ntụ ntụ ruo urughuru. Ntọala okpokoro dị mma, kọmpat, ọrụ etiti, nchekwa, ntụkwasị obi, ngwa ngwa igwe mmadụ, yana nnukwu ozi. A ga -ebipanye akara nchekwa yana mbadamba aha akụrụngwa n'ọkwá akụrụngwa.
Ọdịdị kwụ ọtọ nke ngwa nrụpụta ihe niile na -emezu ihe achọrọ maka usoro mmepụta, n'otu oge ahụ, a na -enwe ahụ iru ala chọrọ n'ọmụmụ ihe. Ọzọkwa, ọ na -eme ka onye ọrụ rụọ ọrụ nke ọma ma zuo oke na mwepu, nhicha ma ọ bụ mmezi, n'otu oge ahụ, ọ na -ezere ohere nke ihe egwu n'ihi ịdị elu, na -abawanye ihe nchekwa na mwepu, nhicha ma ọ bụ mmezi.
2. akụkụ kọntaktị na ọdịdị igwe niile nwere ọgwụ bụ nke igwe anaghị agba nchara 316 (ewezuga akụkụ ike igwe). A na -egbu ihe dị n'ime ya na -enweghị akụkụ nwụrụ anwụ, ọ dịghịkwa mfe ịchekwa ihe. Ọdịdị mpụga dị mfe, dị larịị ma dịkwa mfe ihicha. A ghaghị ijide n'aka na ihe ndị ọzọ agaghị adapụ, enweghị ntụpọ, na-eguzogide corrosion, na-eguzogide ọgwụ ma dịkwa mfe ihicha. Ngwa pipeline bụ igwe anaghị agba nchara 304.
3. a na -emechi akụkụ niile nke na -emetụta ọgwụ (oghere na -arụ ọrụ) yana nọọrọ onwe ha, akàrà ahụ nwere ọkwa abụọ ma ọ bụ karịa iji hụ na ịdị ọcha chọrọ yana gbochie mmetọ. Ihe akara ga -abụ rọba silicone ma ọ bụ PTFE, a ga -enyekwa akwụkwọ nyocha ruru eru yana akwụkwọ asambodo nkwenye.
4. nhazi usoro nhazi usoro niile nwere ezi uche, usoro nke ọ bụla na usoro na -aga, egwuregwu ike egwuregwu, enweghị mgbochi, ihe nchịkọta, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
5. a ga -eji nkeji metric maka ngwa nha na njikọta akụrụngwa, a ga -enyekwa akwụkwọ nyocha ruru eru na asambodo nkwenye; Ntinye na wiring nke ngwa eletriki na -ezute nkọwa teknụzụ yana ihe achọrọ;
Nke gara aga: GYC100 akọrọ granulator
Osote: GZL100 akọrọ granulator
Akọrọ Granulator N'ihi na -emepụta ọgwụ
Akọrọ Granulator Machine
Akọrọ ntụ ntụ Granulator
Akọrọ ala Granulator
Ụlọ nyocha ihe akọrọ Granulator